नेकपामा कसको पाखुरा बलिया ? - Kantipath.com
नेकपामा कसको पाखुरा बलिया ?
लामो समयदेखि नबसिरहेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक कहिले रोपाइँ, कहिले मदन जयन्तीका नाममा रोकिँदै अघि बढेको छ । आधीभन्दा बढी नेताहरुले मन्तव्य प्रकट गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष स्वयंले छिमेकी देशसँग जोडेर सहकर्मीहरु नै आफूलाई सत्ताच्युत गर्ने षड्यन्त्रमा संलग्न रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि आजको बैठकमा गरमागरम हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘नेताहरु षड्यन्त्रकारीको पहिचान खोल्न माग गर्ने मुडमा छन्,’ एक जना नेताले बताए । उनले भने नेकपामा कसको पाखुरा बलिया आज परिक्षण हुन्छ ?
चालु बैठकले पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवै क्षेत्रमा असफल ठह¥याउँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने सम्भावना छ । ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको प्रावधानअन्तर्गत या त उहाँले सरकार छाड्नुपर्ने हुन्छ, या पार्टी नेतृत्व, दुवै पदमा निरन्तरता अब कुनै पनि किन्तु परन्तुले सम्भव छैन,’ ती नेताले बटमलाइन सुनाए । वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले पनि बोल्न बाँकी नै छ ।
माओवादी कित्ताको भएर पनि सचिवालयमा हालसम्म प्रधानमन्त्रीको रक्षाकवच बन्दै आउनुभएका गृहमन्त्री वादल आजचाहिँ एमसीसीलगायत यी सबै प्रकरणमा वर्षात बनेर बर्सिने हो कि बीचैमा बिलाउने हो ठेगान छैन । किनभने प्रश्न उहाँको मन्त्रालयसँग पनि गाँसिएको छ, जसले देशको आन्तरिक सुरक्षा र विदेशी गतिविधिमाथि समेत निगरानी राख्ने गर्दछ । र, आरोप आफ्नै नेताहरुमाथि समेत लागिसकेको अवस्था छ । त्यो पनि गुप्तचर विभागलाई सिधै आफूमातहत तानिसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीको तहबाट ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा आशनको ‘राजनीति’ ले अर्को चरण लिएको छ । जारी स्थायी समिति बैठकमा पार्टीका दुई नेतालाई सुरुमा विशेष सोफा र अरु नेताका लागि साधारण कुर्सीको व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर नेताहरुले शीर्ष तहबाट ‘सामन्ती’ चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना गरे । त्यसपछि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि अरु सदस्यको जस्तै सामान्य कुर्सीको व्यवस्था गरिएको थियो । साधारण कुर्सीमै पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तथा शीर्ष नेताको आशन अरु सदस्यको भन्दा माथि ड्यासमा थियो । तर मंगलबारको बैठकमा सबै शीर्ष नेताहरुको आशन ‘समान’ देखिएको छ । अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरुको आशन उही तहमा गरिएको छ । शीर्ष नेताहरुको कुर्सी मञ्चबाट तल झारिएको हो ।
Previous Previous post: अनलाइन कक्षाको नाममा शूल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गर्ने अखिलको चेतावनी, शूल्क नतिर्न अभिभावकलाई अपील
Next Next post: असार २० भित्र एसइईको नतिजा पठाउनु पर्ने